China Plane Labeling Machine Manufacture uye Fekitori |S-conning
kudyisa otomatiki uye kunyora mazita ezvinhu zvakafuratira
S213 ndeye yakasarudzika yakagadzirwa otomatiki kudhinda uye shandisa label masisitimu uye applicator mumhando yemazuva ese zvizorwa, zvemagetsi, zvemishonga, zvekudya & zvinwiwa zvimwe zvigadzirwa zvemaindasitiri.
The Optimal Upgrade
Iyo yakazvimiririra reversely-rubbed feeder inogovera zvinhu zvakapfava nehukuru hwakasiyana uye ukobvu zvakatsetseka uye zvakatsiga.
A vacuum suction conveyor inotungamira kune yakagadzikana uye yakanyatso kufambisa yezvigadzirwa Dhinda batch nhamba, zuva, nguva, yakatarwa data uye zvichingodaro munguva chaiyo.
Kudyisa otomatiki uye kunyora mazita ezvinhu zvakafuratirwa semakatoni akapetwa, mapepa, makadhi nezvimwe. Sarudzo dzakabatanidzwa dzinosanganisira kudhindwa kwepamhepo kweruzivo rwakasiyana uye mabhakodhi/OR kodhi, kuongorora uye kurambwa otomatiki.
-Vacuum inobatsira conveyor kuti ive nechokwadi chekugadzikana kwechigadzirwa panguva yekufambisa uye kunyora, uye nekudaro inobvumira kukurumidza kushanda kwehurongwa.
-Yakawedzera yakafara feeder uye nzira yemidziyo yekutarisira huwandu hwakasiyana hwehukuru hwechigadzirwa.
Yakakura yakawanda inogadziriswa sutu kune akasiyana saizi chinhu.Iyo yakasarudzika pneumatic inobata label mechanism, simbisa iyo yekurevera chaiyo.
inonzwisisika uye inochinjika dhizaini yakanakira akasiyana zvigadzirwa kunyora.
label applicator muchina unogona ndege kunyora kune akasiyana chinhu, kuwedzera application renji;
* Inogona kubatanidzwa nechero otomatiki yekugadzira mutsara isina musono
*Tekinoroji yakasarudzika yekudyisa tekinoroji inogonesa kuwirirana, kurongeka kwechinzvimbo, hapana kutsauka kana uri mubatch, hapana inotyora kunyora kana iri mukumhanya kwakanyanya.
*Mature tekinoroji inovimbisa kuti hapana kuunyana uye hapana mabhuru emhepo kana uchinyora.
*Muti-intelligent inspection system yakakwana yekumhanya-mhanya, kurongeka kwepamusoro, uye kugadzikana.
*Muchina wekunyora wakazara unotora SUS304 simbi isina uye yakakwirira-simba aruminiyamu alloy kutevedzera cGMP, FDA, OSHA, CSA, SGS, uye CE.
-Yakavakwa-mu-operation bhuku: vanotanga vanogona kudzidza kubva kuchiratidziro mashandisiro emakina mukati menguva pfupi.Izvi zvinochengetedza zvese mari uye nguva panguva yekudzidziswa.
-Mushandisi-inoshamwaridzika label kureba kuseta system: Iyo yekumusoro-kusvika-zuva HMI inodzora inobvumira mushandisi kuseta label paramita.
-Iyi yakasarudzika uye inovandudza sisitimu inogona kuvimbisa kuti label marongero akarongedzerwa nemazvo uye anoiswa pachinzvimbo chakakodzera.
-Pre-set counter - huwandu hunogona kugadzikwa kune yekugadzira batch uye muchina unozomira otomatiki sezvo huwandu hunowanikwa.
Dimension (L)2570 x (W)750x(H)1530mm
Container size (W)40mm ~ 180 X (L)60~250 X (H)0.3-2mm
Labeler kururama ± 1.0mm
Zvakapfuura: S307 High speed vial labeling muchina
Zvinotevera: Automatic Horizontal Labeling uye kurongedza System
Lipstick yezasi yekurevera muchina
Printer For Cosmetics Jars Bottles, Syringe Assembly uye Labeling System, Sticker Labeling Machine Manufacture, Plastiki Chisimbiso Machine, Label Applicator Machine Yemabhokisi, Commercial Bottle Labeling Machine,